I-tableware yabantwana ibalulekile!
Ukupheka nokusondeza abantwana abancinci, kubalulekile ukusebenzisa izitya eziphezulu kuphela ezingabangela ukunyamezela, aziyi kuvumela ukungcola okungcolileyo ukungena ekudleni. Eyona ndlela ingcono kwizinto eziphathekayo kwiitya zezingane zi-alloy yezokwelapha ezikhethekileyo. I-alloy enjalo iqukethe insimbi yekhwalithi ephezulu kunye nokongezwa kwexabiso elikhulu le-nickel kunye ne-chromium. I-Nickel kufuneka ibe malunga neepesenti ezilishumi, i-chrome-malunga neshumi elinesibhozo. Izinto ze-alloy enjalo ziyakhutshwa ngokupheleleyo, zingekho phantsi kwe-alkaline kunye ne-media acidic, kwaye ayiyikudubula.
Nangona kunjalo, iindleko zezidlo zabantwana ziphezulu kwaye, ngelishwa, ayinayo yonke intsapho inokuyithenga. Kodwa kunokwenzeka ukuyenza kunye ne-tabletware yabantwana abancinci, banikeze ukhetho lwempahla ephezulu. Iipropati zempahla eyahlukeneyo apho abakhiqizi benza izitya zentsana zichazwe ngezantsi.
Izitya zokutya zokunyusa abantwana abangaphantsi kweminyaka emithathu zenziwe kwiintlobo ezininzi zeeplastiki. Ezi zi-polymers zokutya ezikhethekileyo zomgangatho ophezulu. Ngokuqhelekileyo izitya zabantwana zokutya zisebenzisa i-polystyrene, i-polycarbonate okanye i-polypropylene. Kwiipropropylene izitya, unokutshisa ngokukhawuleza iimveliso ezigqityiweyo kwi-oven microwave, ezingenakutsholwa kwezinye iiplastiki. Impendulo eyintloko yeempahla zeplastiki kukuba ukutya okukhawuleza kukukhawuleza. Ubomi benkonzo yempahla yokutya kwiplastiki ayidluli kwiminyaka emithathu, kwaye kwimeko efanelekileyo ilungele ukuguqulwa ngonyaka.
Enye into ephambili kwiplastiki iyinxalenye ye-porcelain. I-porcelain cookware ine-resistance high heat resistance, ngelixa lihle kakhulu kwaye linzima kancane. Ubomi benkonzo yeesitya ze-porcelain zenziwe ngokungenamkhawulo, zingasetyenziswa kwi-microwave kunye ne-oven. Ukuphela komda wokuba i-porcelain yintlupheko yayo. Ukuba kukho ne-crack encinci kwiitya, awukwazi ukuyisebenzisa kamva.
Impahla eyenziwe yonyango kunye nensimbi engenasici, isinyithi ehlanganiswe ne-eamel ephezulu ngokubhekiselele kwimiba yazo yezinto eziphilayo zona zintle kakhulu kumntwana. Kodwa ukusetyenziswa kwayo kungakhuselekanga, kuba isinyithi siyatshisa ngokukhawuleza kwaye iinqununu zokukhusela azihlali zikwazi ukukhusela umntwana ekutshiseni.
I-Tableware evela kwitheyesi yesilivere ine-bactericidal kunye ne-disinfectant effect. Kodwa olu hlobo lwezinto lufuna ukunakekelwa rhoqo. Ukuba isinyithi simnyama okanye sihlanganiswe nefilimu ye-matte, izitya kufuneka zisuswe kwi-circulation kwaye zicocwe kakuhle. Ngamanye amaxesha isilivere sinokubangela nokuziphendulela.
Akukho mzekelo ongenakusetyenziswa njengezimbizo zezingane kunye neeplates ze-aluminium, ingakumbi ezitsha. Ngokuhamba kwexesha, izitya ze-aluminium ziqala ukunika inani elaneleyo lezinto ezinobungozi ezinokubangela ukutyhefu kunye nezinye iziphumo ezibuhlungu.
Ukongeza kwizinto eziphathekayo xa kuthengwa izitya zezingane kufuneka uqaphele ukuma kwayo. Eyona nto ibhetele, ukuba isitya sinemiphetho ephakamileyo, kulo mzekelo, umntwana unokuxhomekeka kubo ngemfoloko okanye i-spoon ukuze ahambe ngokukhawuleza ukutya. Ubungakanani beplate buzimisele ngokususelwa kwisondlo kunye nobudala bomntwana. Isitya kufuneka sibe kunye nokutya okunjengokuba umntwana angadla ngexesha. Iifolo kunye neepuni kubantwana zivame ukuba zenziwe ngeengqungquthela ezincinci ukuze kube lula ukuzisa ukutya emlonyeni. Ukufakela iifuni akufanele zibukhali. Kukho iipuni kunye neebhakethi ezithambileyo. Zisetyenziselwa umncinci. I-spoon enjalo ayiyi kubangela ubuhlungu besisu somntwana.
Xa uthengela izitya zezingane, kufuneka ucele umthengisi ngesitifiketi sokuthobela kunye nesitifiketi esicocekileyo kunye ne-epidemiological kwimveliso nganye. Kuphela ukuba zikhona, ungathenga izitya zomntwana.
Yintoni enokumnika umntu ongadingi nantoni na?
Ukuthenga okuhlangeneyo - indlela yokugcina imali
Indlela yokujonga umgangatho weoli efunekayo
Iindlela zokwandisa ukuzithemba
Imisitho yomlilo: khetha isipho sokuqala kwi-Humpty Dumpty
Indlela yokugcina i-caviar emnyama
Indlela yokukhetha ioli yelunga elimnandi
I-mexican cactus ipake
Ukwenza izikhumbuzo ezivela kwiglasi
Indlela yokukrazula i-dandruff
I-Goji berries yokulahleka kwesisindo: inzuzo okanye inkohliso?
Imithetho emininzi yokunakekelwa kwezandla
I-hour yeklasi ye-Cosmonautics-kubafundi beeklasi ze-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-Iingcamango zokubamba ireyithi yeklasi kwi-Cosmonautics Day nge-9, 10, 11
I-Pilaf eneemvana zegusha
Inyanga yesithathu yobomi bentsana
Ikhefu elibhaka kunye nemifuno
Imiba yeFebhuwari 23 amantombazana emantombazaneni - amfutshane kwaye ahlekisayo ngamagama. Ndiyakuvuyela kwindinyana ngomhla we-Defenders of Fatherland ngoFebruwari 23, 2017 amakhwenkwe ama-3-4 amaklasi
Umfana undihlazisa, kodwa akayekanga, kutheni?
Ukuphulukiswa kunye nemimangaliso ye-vesuviana
Ulwaphulo lomculo njengoluhlobo lobugcisa bonyango
I-Bandage yabasetyhini abakhulelweyo, nini kunye nendlela yokugqoka ngayo